मेरो विश्वाश: अतितसँग झुमेका पलहरु
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) said on April 2, 2010 at 2:31 PM
अहिले को बर्तमान जस्तो सुकै भए''नि ... विगत मा त्यसको अनुभूति अलिक छुट्टै लाग्दछ आशा जी !
नकारात्मक कुराहरु (आफुलाई नैरस्यता ल्याउने खाल्का) देखि बाहेक ...आफ्ना पलहरुलाई संगाल्न सके धेरै राम्रो हुने'छ !
रमेश मोहन अधिकरी said on April 9, 2010 at 6:05 AM
तपाईँको कविता राम्रो लाग्यो । लेख्तै रहनुस् । यही स्तर राखिराख्न सक्नुभयो भने जीवनमा सफलताहरू ओइरो लाग्नेछन् ।